Nandritra ny dingan'ny famokarana zezika biolojika ara-barotra, misy fitaovana manandanja izay mitana andraikitra lehibe amin'ny dingana fanamasinana ny fako biolojika — ny masinina mpanodina compost, hampahafantatra fahalalana fototra momba ny turner compost izahay, ao anatin'izany ny asany, ny karazany ary ny fomba hisafidianana iray mety.
Fiasan'ny turner compost
Ny compost turner dia nanjary fitaovana fototra amin'ny fananganana aerobic dinobika noho ny vokany lehibe amin'ny zezika sy ny fanala.
♦ Fampifangaroana ny fiasa amin'ny fametahana ny akora: amin'ny composting, ilaina ny manampy singa madinidinika mba hanitsiana ny tahan'ny azota karbonika, ny sandan'ny pH ary ny atin'ny rano amin'ny akora. Ireo akora fototra sy akora madinidinika izay atambatra arakaraka ny ampahany sasany dia azo afangaro amin'ny alàlan'ny fanodinana compost matihanina mba hahalefaka kokoa.
♦ Amboary ny mari-pana amin'ny antontam-bary: mandritra ny fizotran'ny asa, ny compost turner dia afaka mifampikasoka tanteraka amin'ny akora ary mifangaro amin'ny rivotra, izay afaka manitsy ny mari-pana ny antontam-bary. Manampy ny zavamiaina bitika aerobika ny rivotra hamoahana ny hafanan'ny fermentation, hiakatra ny mari-pana. Mandritra izany fotoana izany, raha avo ny mari-pana amin'ny antontam-piavy, dia mety hitondra famatsiana rivotra madio ny rivotra, izay afaka mampihena ny mari-pana. Ary ny zavamiaina bitika mahasoa isan-karazany dia mitombo sy mitombo ao anatin'ny maripana mahavariana.
♦ Fanatsarana ny fatran'ny fomban-tsakafo: ny rafitra fanangonam-bokatra dia afaka manapotika ny zana-kazo sy ny vodin-kazo manadino azy ho lasa masinina kely, mahatonga ny piles ho malefaka, mamelatra ary misy porosia mety, izay fenitra lehibe handrefesana ny fahombiazan'ny turner compost.
♦ Manitsy ny hamandoan'ny antontam-bokatra: ny fatran'ny rano ny akora ho an'ny fermentation dia tokony fehezina ao anatin'ny 55%. Amin'ny fanamasinana, ny fihetsika biokimika dia hiteraka hamandoana vaovao, ary ny fihinanana zavamiaina bitika amin'ny akora dia hahatonga ny hamandoana hamoy ny mpitatitra ary ho afaka. Noho izany, miaraka amin'ny fihenan'ny hamandoana ara-potoana amin'ny fizotran'ny fermentation, ankoatry ny fitrandrahana vokatry ny fitarihana hafanana, ny fihodinan'ny akora akoramilina fanodinana compost dia hamorona etona mandoto ny etona avy amin'ny rano ihany koa.
♦ Mahatsapa ny fepetra manokana takiana amin'ny fizotran'ny composting: ohatra, turner compost afaka mahatsapa ny fepetra takiana amin'ny fanorotoroana ireo akora manta sy ny fihodinana mitohy.
Ny masinina fanangonam-bokatra dia mahatonga ny fermentation ho tsotra kokoa, fohy kokoa ary hahatratra ny vokan'ny fermentation antenaina. Ireto misy masinina turner compost iraisana maromaro.
Types an'ny mpanodina zezika
Turner Compost plate plate
Ity andiana compost turner ity dia voalamina tsara, ny rojo izay mampiasa ampahany avo lenta sy maharitra. Ny rafitra Hydraulika dia ampiasaina amin'ny fampiakarana sy fampidinana, ary ny halalin'ny fihodinana dia mety hahatratra 1,8-3 metatra. Ny haavon'ny fiakarana mitsangana dia mety hahatratra 2 metatra. izany
afaka manao ny asa famadihana haingana kokoa, amin'ny fomba mahomby kokoa ary amin'ny fampiasana fanampiny. Miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny famolavolana kely, ny fiasa tsotra sy ny toeram-piasana, ity milina fanaovana zezika ity dia azo ampiasaina amin'ny sehatra samihafa amin'ny akora samihafa, toy ny zezika, ny maloto ao an-trano, ny fako ara-tsakafo, ny fako biolojika fambolena sns.
Izy io dia mandray ny drive chain sy ny firafitry ny takelaka fanohanana miaraka amin'ny fanoherana kely, ny fitsitsiana angovo ary mety amin'ny asa fanaovana composting lalina. Ankoatr'izay dia manana fahaizany mamotipotika izy io ary misy akony tsara amin'ny famenoana oksizenina ny antontam-bokatra. Ny fihetsehany mitsivalana sy mitsangana dia afaka mahatsapa ny fihodinan'ny asa amin'ny toerana rehetra ao anaty ventin, izay malefaka. Saingy misy fetrany ihany koa fa tsy afaka miasa afa-tsy amin'ny fitoeran-drano fermentation izy io, noho izany ny fisafidianana an'io dia mila manangana ilay tanky mifangaro mifangaro.
Crawler karazana Compost Turner
izany Turner compost karazana crawler dia fitaovana manokana namboarina ho an'ny composting windrow sy ny teknolojia fermentation hamokarana zezika organika. Tsy natao ho an'ny faritra malalaka ivelany ihany io, fa koa ho an'ny atrikasa sy trano fandraisam-bahiny. Izy io dia manana fahaiza-mampifanaraka matanjaka, azo antoka sy azo antoka fampisehoana ary fikojakojana mety. Araka ny fitsipiky ny fanamasinana aerobika, ity milina ity dia manome toerana ampy ho an'ny bakteria zymogeneous hilalao ny anjara asany.
Karazana kodiarana Compost Turner
Machine Type Composting Turner Machine dia fitaovana fanaovana composting sy fermentation mandeha ho azy miaraka amin'ny halavany sy ny halalin'ny zezika, ny fotaka ary ny fako, ny fotaka fanivanana, ny mofomamy maloto ambany kokoa ary ny famoahana mololo ao amin'ny famiazana siramamy, ary be mpampiasa koa amin'ny fanamasinana sy ny tsy fahampian-drano ao zavamaniry zezika biolojika, zavamaniry zezika mitambatra, ozinina maloto sy fako, fambolena zaridaina ary zavamaniry bismuth.
Torohevitra momba ny fisafidianana ny turner compost
Na miditra tsena fotsiny ianao, na efa za-draharaha amin'ny composting, dia mipetraka foana ny fanontaniana momba ny karazana compost turner mety indrindra amin'ny ilanao sy ny fehiny. Ny safidy dia tery ihany rehefa avy nandinika ny anton-javatra, ny fepetra ary ny tanjon'ny asa fanaovana zezika.
Rehefa mividy dia alao antoka fa azo antoka sy azo antoka ny fitaovana.
Ny fahombiazan'ny turner compost iray dia voafaritry ny hafainganam-pandehan'ny fivezivezeny sy ny haben'ny windrow izay zakany.
● Safidio ny turner compost arakaraka ny antontam-pitaovana sy ny famadihana. Ny milina lehibe kokoa sy matanjaka kokoa amin'ny ankapobeny dia manana taham-pivoarana lehibe kokoa noho izy ireo manodina antontam-bary lehibe kokoa.
● Diniho koa ny filan'ny habakabaka masinina mpanodina composte. Ny turner compost karazana crawler dia mila toerana malalaka kokoa noho ny maodely hafa.
● Mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny safidin'ny fitaovana fanaovana compost koa ny vidiny sy ny teti-bola. Ny masinina manana fivoarana sy fahaiza-manao lehibe kokoa dia hanana vidiny avo kokoa, ka safidio izay mety.
Raha fintinina, isaky ny anjarany, afaka mamaly amin'ny US ianao.